Warshadda hoobiye ee qallalan, Qalabka isbarbar dhiga, Qalabka PC - Shantui
Tilmaamyada 1. Isku-xirnaanta habboon iyo kala-goynta, dhaqdhaqaaqa sare ee kala-guurka, habboon oo dhakhso leh, iyo la-qabsiga goobta shaqada oo qumman. Qaab dhismeed iswaafaqsan oo macquul ah, naqshad qaabdhismeed sare; Hawlgalku wuu cad yahay wax qabadkiisuna waa deggan yahay. 4. Qabsashada dhulka oo yaraata, wax soo saar badan; Nidaamka korantada iyo nidaamka gaaska waxaa lagu qalabeeyaa kalsooni sare iyo mid sare. Warshadda isku darka la taaban karo ee moobiilku waa qalab wax soo saar la taaban karo oo isku dhafan keydinta maaddada, miisaan ...
Tilmaamyada 1. Isku-xirnaanta habboon iyo kala-goynta, dhaqdhaqaaqa sare ee kala-guurka, habboon oo dhakhso leh, iyo la-qabsiga goobta shaqada oo qumman. Qaab dhismeed iswaafaqsan oo macquul ah, naqshad qaabdhismeed sare; Hawlgalku wuu cad yahay wax qabadkiisuna waa deggan yahay. 4. Qabsashada dhulka oo yaraata, wax soo saar badan; Nidaamka korantada iyo nidaamka gaaska waxaa lagu qalabeeyaa kalsooni sare iyo mid sare. Qaabka Qeexida SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Wax soosaarka aragti ahaaneed m³ / h 25 40 50 ...
Astaamaha 1. Qaab-dhismeedka bilaashka ah ee aasaaska, qalabka waxaa lagu rakibi karaa wax soo saar ka dib marka goobta shaqada la simo oo la adkaado. Ma aha oo kaliya in la dhimo qarashka dhismaha, laakiin sidoo kale la gaabiyo wareegga rakibidda. Naqshadeynta qaabdhismeedka badeecaddu waxay ka dhigeysaa mid ku habboon oo deg deg ah kala-goynta iyo gaadiidka. 3. Guud ahaan qaab dhismeedka is haysta, qabsashada dhulka oo yaraata. Qaabka Tilmaanta SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
Astaamaha Warshaddu waxay ka kooban tahay nidaamka wax lagu barto, nidaamka miisaanka, nidaamka isku dhafka, nidaamka korontada lagu xakameeyo, nidaamka kontoroolka pneumatic iyo wixii la mid ah isu geynta, budada, dareeraha lagu daro iyo biyaha si otomaatig ah ayaa loo miisaami karaa uguna qasmi karaa geedka. Isku-darka waxaa lagu raray weelka hore xajiyaha weelka. Budada waxaa laga soo siiyaa silo ilaa miisaanka miisaanka iyada oo la qaadayo qalabka wax lagu buuxiyo .Water iyo daro dareere ayaa lagu shubaa miisaanka. Dhammaan nidaamyada miisaanka ayaa ah miisaanka elektarooniga ah. Warshaddu si buuxda ayey u shaqeysaa ...
Shantui Janeoo Makiinado Co., Ltd. waa soosaarkii ugu horreeyay ee isku dhafka shubka iyo mashiinnada gaadiidka ee shirkadaha waaweyn ee muhiimka ah, waa CREC, CRC sanadihii la soo dhaafay lamaane istiraatiiji ah, warshadda isku-dhafka la taaban karo ee ugu weyn, warshadda isku-darka asfaltiga, Mortar qallalan qallalan. warshad, warshad ganacsi heer sare ah oo isku dhafan, bamka jiida, qalabka qashinka lagu rido iyo qasacyo kala duwan.
Codsiga sjhzs75-3e qalabka isku dhafka la taaban karo ee dhismaha maraakiibta macaamiisha ee Myanmar
Waqtiga dhismaha: Oktoobar 2020 Goobta arjiga (nooca injineernimada): Dhismaha magaalooyinka dhismeedka nooca: qalabka isku dhafka shubka Codsiga: Oktoobar 9, 2020, maalmo badan ka dib rakibid iyo hagitaan fog, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E qalab isku dhaf ah oo la taaban karo ayaa si guul leh u dhameystiray .. .
Codsiga SjHZS90-3B Xixiayuan Mashruuca Ilaalinta Biyaha
Waqtiga dhismaha: Sebtember 2020 Goobta arjiga (nooca injineernimada): beeraha, dhirta iyo dhirta dhowrista biyaha Nooca qalabka: qalabka isku dhafka shubka SjHZS90-3B silo sibidh waa macaamiil silo duug ah. Codsiga ： Bishii Sebtember 2020, labada SjHZS090-3B dhirta wax ku oolka ah ee Shantui J ...
Warshad isku dhaf ah oo la taaban karo SjHZS75-3E ayaa u adeegta macaamiisha Myanmar
Shantui Janeoo warshadda isku dhafka shubka ee SjHZS75-3E ayaa si guul leh ku soo gabagabeysay waxsoosaar xamuul culus bishii Oktoobar 9,2020.Maalmo badan oo hagitaan fog ah, waxay fureysaa wadada si ay qiimo ugu abuurto macaamiisha Myanmar Waxaa saameeyay xaaladda faafa, injineerka adeegga iibka kadib ma aadi karo ...
Shantui Janeoo waxay ku guuleysataa iibinta ballaaran ee dibedda dibedda ee dhirta waaweyn iyo gawaarida isku dhafan
Dhawaan, Shantui Janeoo 2XSjHZS120-3B warshad batching la taaban karo iyo 10 nooc oo gawaari isku dhaf ah oo isku dhafan oo cabirkiisu yahay 12-mitir oo laba jibbaaran ayaa si guul leh loogu diray Filibiin, safarka adeegga ee caawinta mashruuca dhismaha ee Metro Manila ayaa dhawaan bilaaban doona. Goobta geynta, xubnaha dhammeeyay ...
Adeegyada Shantui Janeoo ee mashruuca dhismaha tareenka Shiheng Canggang
Dhawaan, lixda qaybood ee SjHZS240-3R warshad isku dhaf ah oo la taaban karo oo Shantui Janeoo u isticmaashay dhismaha Shiheng-Canggang Intercity Railway ayaa la rakibay oo si guul leh loogu gudbiyay macaamiisha. Dhammaan qalabka ayaa qaatay qaab dhismeedka silo sibidhka, qalab walbana wuxuu ku qalabeysan yahay ...